Universal ekuseni ukukhula izinhlobonhlobo utamatisi "Cranberries ushukela" ikhula kahle kule abamba ukushisa bese uvula ensimini, kanye efasiteleni egumbini noma izigubhu on emphemeni. nezimo Ezinhle nezimo ezahlukahlukene, ukumelana okulimaza sekwephuzile futhi izinambuzane - hhayi yonke izimfanelo engcono yale Bush elincane kodwa egcwele izithelo.
Utamatisi "Cranberries ushukela" zokuhlobisa kakhulu, icwecwe futhi ifinyelela ukuphakama hhayi ngaphezu kwesigamu, futhi cishe awekho ifomu zokutholwa ayidingi garters. Izithelo okukhanyayo, naphakathi, nesisindo 15 amagremu, ukunambitheka namanzi futhi amnandi.
Njengazo zonke amalungu nightshade, utamatisi "cranberry ushukela" - umkhiqizo wezokudla esiyingqayizivele, ikhalori izithelo ezivuthiwe okuyinto esingaphansi 23 kilojoule. Abahlukile kwakwakhe amavithamini nge acid eziphilayo kanye isethi eyingqayizivele izakhi zamakhemikhali ukunikeza notamatisi ukunambitheka hhayi kuphela ezinkulu kanti iphunga, kodwa futhi emangalisayo izimfanelo ukuphulukiswa. Ukusetshenziswa utamatisi ekudleni okuboniswe yezifo izinso, inhliziyo nemithambo yegazi, ngcono nesimo igazi, kunciphisa amazinga cholesterol, normalizes pheshana emathunjini. Futhi-ke, le emnandi kunazo sikhule umuthi esihlwabusayo uqobo.
Nakekela isivuno wensimu ezinhle iqala entwasahlobo, uma kuziwa isikhathi sokutshala imbewu utamatisi izithombo. Kwenza imithetho yayo siqu kwi isikhathi betshala ukunakekelwa nesivinini yokudla yokuvuthwa izinhlobo zokuqala, njengoba utamatisi "Cranberries ushukela". Izibuyekezo balimi sebekujwayele lokhu yemifino amahle kakhulu, sisuke ngazwilinye ekunqumeni isikhathi wokutshala: ekupheleni kukaMashi. Imbewu pretreated isixazululo noma stimulator manganese "Appin" seeded esitsheni inhlabathi kahle oswakanyiswe for Solanaceae lalihlehliswa 2 cm. Gilazi ifilimu ivaliwe futhi washiya ku ukukhanya endaweni efudumele.
Izinhlobonhlobo has amahlumela ezinobungane kokuvela ngosuku 4-6. Lapho kwenzeka, ususe tape. Phakathi nale nkathi, yokudla ayidingekile. Ukunisela zokutshala kufanele kube kanye ngesonto futhi nsuku zonke turning amabhokisi izithombo, ukugwema edonsa amagciwane luhamba luye ohlangothini olulodwa.
Shintshela, t. E. Isihlalo amahlumela phezu iziqukathi ehlukile, kufanele ulethe ukubonakala ishidi yesibili. Feza le nqubo kumele kube okusheshayo, uzama ilimaze amahlumela, bese ephuzisa kahle ngamanzi afudumele. Ngaphambi ukutshala izithombo ku abamba ukushisa noma endle, kabili okuphakelayo yayo eziyinkimbinkimbi Umanyolo "Aelita-zemifino", ziyoncibilika ngamanzi ngokulandela imiyalelo.
Ngokushesha nje lapho izithombo baqine futhi ukufudumala emgwaqweni, ungenza ukuqina, ukuvula izimbobo egumbini kanye izitshalo. Uma amazinga okushisa ebusuku musa bawe ngezansi 10 C °, kutuswa ukuba ugcine iziqukathi ku balcony noma masimu iwashi.
izithombo Ukutshala kule abamba ukushisa kungaba kule minyaka eyishumi lesibili enyangeni kaMeyi, futhi kuzophela ngokushesha nje nqabela ku ekhanyayo. Uma ufuna ukuhlobisa kuvulandi, kubalulekile ukulungiselela esitsheni ephethe namandla hhayi ngaphansi kuka 6 amalitha isitshalo ngasinye futhi ukukhumbula ukuthi ezikhulayo izimbiza enzima ngaphezulu: kuyadingeka kaningi ukuze ondle futhi amanzi utamatisi "Cranberries ushukela". Izibuyekezo ezikhulayo utamatisi on emphemeni ukukhombisa ukuthi isitshalo kudinga ukunakekelwa, kodwa futhi nge isivuno esihle, futhi ngaphezu kwalokho, enhle ukuhlobisa isikhala ezibazungezile.
Ngaphambi kokuba uqale betshala udinga elungisa inhlabathi abese isitshalo. izinsuku 2-3 ngaphambi zitshala izithombo kuthiwa olufuthwe nge isixazululo boric acid esikhungweni lokuhlushwa 1 g ngalinye 1 litre amanzi. Lokhu kuzonciphisa ukucindezeleka futhi ngeke uvumele isitshalo ukulahlekelwa flower efihlekile phezu isandla kuqala.
Utamatisi "Cranberries ushukela" uthando ukukhanya loam evundile. Oku ukumba up inhlabathi kumele ungeze ku ngamunye imitha skwele ibhakede Peat kanye humus, futhi isixazululo kahle ezichitha inhlabathi kukamanyolo Peat-humic. Okungcono kakhulu, uma le nqubo yase bawenza ekwindla. amagciwane Phila yalezi fertilizer uzovikela izithombo ezifweni anobuciko kanye izinambuzane.
Utamatisi abatshalwé imbobo nge esingaba 40-45 cm futhi ibanga cm 60 phakathi imigqa, kuthiwa uvalo. Quality izithombo undersized notamatisi ngokuvamile awunankinga lokubikezela: awusebenzi owengeziwe futhi ngeke deform, yakha Igumbi compact zobumba. Ngakho-ke, lesi sitshalo ibekwa imbobo iqonde, ngobunono Unyathela inhlabathi alilinyaziwe uhlelo impande.
Utamatisi "cranberry ushukela", ukubuyekezwa ongatholakala owawezwa balimi abanolwazi ziyavumelana ngokugcwele incazelo umenzi - ngokuqinile wezolimo "Aelita". Ziyakwazi iDemo futhi icwecwe, zingatshalwa ngaphandle garters, kodwa kwaba nezithelo eziningi ezinhle, okuyinto kuzodinga ukweseka okwengeziwe.
Utamatisi kakhulu lifuna anakekele. Ikakhulukazi ukuthambisa ebalulekile, kufanele baphathe amanzi afudumele kuphela futhi mhlawumbe ekuseni. Ukunisela kufanele kuze efihlekile masonto onke kungagcini 5 amalitha 1 sq. M. Izimbali isikhathi ngaphambi izithelo sidinga humidification ophana kakhulu - 10-15 amalitha.
Ukuntula izakhi nethonya elilimazayo ukuthuthukiswa izithombo kanye ikusasa isivuno Ngakho-ke, 2-3 impande yokudla ngesikhathi yokukhula kubaluleke kakhulu. Eyokuqala Kwenziwa ngokushesha ngemva kokutshala greenhouse necebo 0.5 amalitha umquba liquid 30 g we izidakamizwa "nitrophosphate" e ibhakede lamanzi. Ngemva kwezinsuku eziyi-14 ukusuthisa isixazululo yesibili wenziwa ibhakede lamanzi futhi 30 g we potassium sulfate, umanyolo eziphilayo "fertility." Ngisho nangemva kokuba 2 amaviki kufanele kube ukondla izitshalo ne isixazululo of Peat-humic Umanyolo noma iyiphi izinto eziphilayo. Labo ochwepheshe ukunikeza izincomo ukutshala utamatisi on emphemeni, kuphela isibalo feedings kufanele senyukela izikhathi 4-5.
Pasynkovanie ekuseni yokuvuthwa utamatisi undersized ayidingekile. Lokhu lula kakhulu ekunakekelweni grade ezifana utamatisi "Cranberries ushukela". Izibuyekezo futhi balimi Ukushicilelwa ngazwilinye: ongaphakeme izihlahlana compact akuyona inkinga nge pasynkovanie unika isivuno esihle. Naphezu ubukhulu ezincane ehlathini, kuya ikota 1st. m abamba ukushisa ekutshaleni zathathwa kuze 3 kg lezimpahla izithelo.
Magnificent round encane nezithelo amnandi zidliwa fresh, wasebenzisa ukuhlobisa izitsha kanye ekhaya ukupheka, marinades kanye izimpahla okusemathinini. Inhlanganisela umhlobiso enkulu kanye flavour of utamatisi eveza umahluko phakathi 'Cranberries ushukela ". Impendulo evela kumakhasimende kanye abatshali lokhu kuvakashe ummeleli wendlunkulu nightshade ecacile: Utamatisi zinhle!
Kungani Angiyithandi guys abangekho onjengami?